शरिरका यी अंग पुरुषहरुको नजरमा परोस् भन्ने चाहन्छन् युवती - नेपाली खोज
प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेर पनि मानिसले सजिलै परिवर्तन गर्न सक्दैन । विशेष गरेर महिलाहरूका अंग पुरुषका भन्दा आकर्षक हुन्छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने एक न्यूज पोर्टलका अनुसार महिलाको छाती, कम्मर र उसको पछाडिको भाग (कम्मरभन्दा मुनि) लाई धेरैले नजर लगाउने गरेको पाइन्छ ।
र यो पनि पुरुषले महिलाको कुन–कुन अङ्गको ख्याल गर्छन् ?
पुरुषले पहिलो पटक महिलालाई हेर्दा कस्तो कुरामा विशेष ध्यान दिन्छन् त ? यो कुरा धेरै महिलाहरुको लागि चासोको विषय बनेको हुन सक्छ । जब कुनैपनि युवकको अपरिचित युवतीसँग आँखा जुध्छ । युवकले त्यसपछि नजरले भ्याउन्जेल एकसरो युवतीको सिरदेखि पुच्छार सम्म हेर्छ । पहिलो नजरमा जिउका सबै भागमा आँखा पुराउन सक्ने कुरा भएन । आखिर पुरुषले पहिलो नजरमा महिलाका कुन कुन भाग वा विषयमा ध्यान दिन्छ होला ? मनोविज्ञहरुका अनुसार पुरुषले सुरुमै महिलाका यी ५ कुरामा ख्याल राखेको हुन्छ ?
पथरैया नदीको बेलुवाघाटमा पुल नहुँदा नागरिकलाई सास्ती
सुत्ने तरिका: कसरी सुत्नेः बाँया फर्किएर सुत्ने की दायाँ ?